पाइलटको शव २ सय मिटर टाढा भेटियो, को–पाइलट अस्पताल भर्ना !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
पाइलटको शव २ सय मिटर टाढा भेटियो, को–पाइलट अस्पताल भर्ना !
काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएस बंगला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेको छ । काठमाण्डुबाट बंगलादेशका लागि उडेको विमान बीच बाटोमा प्राविधिक समस्या आएपछि फोर्स ल्यान्डिङ गरिएको थियो ।
दुर्घटनाग्रस्त विमानको मुख्य चालक महिला भएको बुझिएको छ । उनको शव विमान दुर्घटनास्थलभन्दा करिब दुई सय मिटर टाढा डडेकाे अवस्थामा भेटिएको छ । उनी बंगाली नागरिक भएको बताइएको छ । अर्को को–पाइलटको भने उपचार भइरहेको छ । को–पाइलट भने पुरुष हुन् ।
‘हङकङ लाहुरे’को छोरो सुकुलगुन्डा
निर्मला प्रकरणमा एसपी विष्टविरुद्ध फौजदारी अपराध मुद्दा, थुनामा राख्ने बाटो खुल्यो
कांग्रेस समर्थकको सानदार जीत, कम्युनिस्टको दुईतिहाई दम्भ व्यवसायीको चुनावमा चक्नाचुर
बिना मगरको मन्त्रालयमा यस्तो लफडा, प्रचण्ड सँगसँगै केपी ओलीलाई पनि तनाव !
गफमा भुलेको कम्युनिस्ट शासनमा किसानलाई ठूलो आपत !
महामन्त्री डा.कोइरालाको अभियानलाई सहयोग गर्न महासमिति बैठकस्थलमै भयो अच्चमको घटना